China Laryngeal Mask Airway yokusetshenziswa okukodwa ifektri abakhiqizi | I-Kangyuan
2 Way Abicah Foley ipayipi
2 Way Silicone Foley Catheter eneTiemann Tip
Ipayipi le-Silicone Foley nge-Temperature Probe
I-Laryngeal Mask Airway yokusetshenziswa okukodwa
I-Endotracheal Tube enethiphu ekhethekile
Abicah isisu Tube
Umgogodla Wokungena Ngokuncela Ukusetshenziswa Okukodwa
• I-100 silic yezinga lebanga lezokwelapha lokuhambisana okuphezulu.
• Idizayini ye-non-epiglottis-bar inikeza ukufinyelela okulula nokucacile nge-lumen.
• Imigqa emi-5 ye-angular ivela lapho ikhafu isesimweni esicabalele, esingagwema ikhefu ukuze likhubazeke ngesikhathi sokufakwa.
• Isitsha esijulile sekhafula sihlinzeka ngophawu oluhle kakhulu futhi luvimbele ukuvinjelwa okubangelwa yi-epiglottis ptosis.
• Ukwelashwa okukhethekile kwesigaxa samakhokho kunciphisa ukuvuza futhi kugudluke ngempumelelo.
• Ifanele abantu abadala, izingane nosana.
Ukupakisha:Ama-5 ama-pcs / ibhokisi. Ama-50 ama-PC / ibhokisi
Usayizi webhokisi: 60x40x28 cm
Umkhiqizo ulungele ukusetshenziswa ezigulini ezidinga i-anesthesia ejwayelekile kanye nokuvuselelwa okuphuthumayo, noma ukusungula umgudu womoya wokufakelwa wesikhashana wesikhashana weziguli ezidinga ukuphefumula.
Lo mkhiqizo ngokwesakhiwo ungahlukaniswa ngohlobo olujwayelekile, uhlobo oluqiniswe kabili, uhlobo olujwayelekile, izinhlobo ezine eziqiniswe kabili. Intambo ejwayelekile yokungenisa umoya omncane, okufaka izikhwama zekhava, ishubhu elifuthwayo, elibonisa i-airbag, i-valve ehlangene nelafuthwayo; iqiniswe nge-ventilation tube, isixhumi sesikhwama sekhava, ipayipi le-aeration. Inkomba yenduku yomhlahlandlela womoya, (ayikwazi), kanye ne-valve yensimbi ehlangene; uhlobo olujwayelekile oluphindwe kabili ngeshubhu lokungenisa umoya, ishubhu lokuhambisa amanzi, okufakwa esikhwameni sekhava, ishubhu elifuthwayo, elibonisa i-airbag, i-valve ehlangene nelafuthwayo; ipayipi eliphindwe kabili eliqiniswe ngepayipi lokungenisa, ipayipi lokuhambisa amanzi, okufaka izikhwama zekhava, ithubhu elifuthwayo, inkomba i-airbag, iphedi yemikhono yokuxhuma, induku yomhlahlandlela (cha), i-valve ehlanganisiwe nephayiphu. Qinisa futhi uqinise kabili imaski yelaryngeal odongeni lwangaphakathi lwe-trachea ngemikhiqizo yensimbi engagqwali. Ukuqinisa ishubhu lokungenisa umoya, ipayipi lamanzi, ikhava yokuxhuma isikhwama, iphedi yesikhono yokuxhuma, ishubhu elifuthwayo, isikhwama somoya sisebenzisa imiyalo eyenziwe ngezinto zenjoloba ye-silicon. Uma umkhiqizo uyinyumba; indandatho yokuvala inzalo ye-oksijeni, izinsalela ze-ethylene oxide kufanele zibe ngaphansi kuka-10μg / g.
[Model model] bona ithebula elingezansi:
Uhlobo olujwayelekile, uhlobo oluqinisiwe,
Uhlobo olujwayelekile olune-tube kabili,
Uhlobo oluqinisiwe olune-tube kabili
Ukwehla kwamandla emali okuphezulu (Ml)
Isiguli / isisindo somzimba esisebenzayo (kg)
UNeonatus ＜ 6
Ingane6 ~ 10
Izingane10 ~ 20
Izingane20 ~ 30
Umuntu omdala30 ~ 50
Umuntu omdala50 ~ 70
Umuntu omdala 70 ~ 100
Umuntu omdala ＞ 100
1. I-LMA, kufanele ihlole ngemininingwane yokulebula komkhiqizo.
2. Ukuqeda igesi esemgwaqweni womoya womaski womoya wamalaka ukuze i-hood ibe flat ngokuphelele.
3. Faka inani elincane le-saline ejwayelekile noma i-gel encibilikayo yamanzi ukuze uthambise ngemuva kwesembozo somphimbo.
4. Inhloko yesiguli ibibuyile kancane, isithupha sayo sobunxele singena emlonyeni wesiguli nokudonsa umhlathi wesiguli, ukuze sandise igebe eliphakathi komlomo.
5. Usebenzisa isandla sokudla ukubamba ipeni eliphethe isifihla-buso somlomo, ukwenza ukuthi kutholakale, umunwe wenkomba nomunwe ophakathi nendawo umelene nomzimba wokumboza kanye ne-ventilation tube laryngeal mask, umboze umlomo ubheke ohlangothini oluphakathi komhlathi ophansi , ulimi olunamathela phansi ku-LMA pharyngeal, kuze kungabe kusasele phambili kuze kube manje. Futhi ungasebenzisa ukuhlehlisa indlela yokufaka imaski yomphimbo, vele umboze umlomo ubheke ulwanga, uzobekwa emlonyeni kuya emphinjeni ezansi kwesifihlavu somlomo, kanye no-180O ngemuva kokujikeleza, bese uqhubeka nokucindezela imaski yomlomo , kuze kube yilapho ingakwazi ukuphusha kuze kube manje. Lapho usebenzisa isifihla-buso se-laryngeal esithuthukisiwe noma se-ProSeal, induku yomhlahlandlela ingafakwa emgodini womoya ukuze ifinyelele endaweni ebekiwe, nokufakwa kwe-laryngeal imaski ingadonswa ngemuva kokufakwa kwemaski yekhalori.
6. Ukuhamba ngaphambi kolunye uhlangothi ngobumnene ngokucindezela ngomunwe ukuvimbela ukufuduka kwamatheyitha kwe-laryngeal airway catheter.
7. Ngokwenkokhelo encane yokumboza isikhwama esigcwele igesi (inani lomoya alikwazi ukudlula uphawu lokugcwalisa oluphezulu), xhuma isekethe lokuphefumula bese uhlola ukuthi umoya ongena kahle, njengomoya omncane noma ukuvinjelwa, kufanele ngokwezinyathelo zokufakwa kabusha imaski laryngeal.
8. Ukuqinisekisa ukuma kwesifihla-buso se-laryngeal kulungile, vala iphedi yamazinyo, indawo ehleliwe, ugcine umoya.
9. Isembozo somphimbo siyakhishwa: umoya ngemuva kwe-valve yomoya yesirinji enesirinji ngaphandle kwenaliti uyakhishwa kusembozo somphimbo.
1. Iziguli ebezinamathuba amaningi okuthola isisu esigcwele noma okuqukethwe yisisu, noma ezinomkhuba wokuhlanza nezinye iziguli ebezithambekele ekuthini ziphinde zivele.
2. Ukwandiswa okungavamile kwesiguli ngokopha emgudwini wokuphefumula.
3. Amandla eziguli ezivimbela umgudu wokuphefumula, njengomphimbo obuhlungu, ithumba, i-hematoma njll.
4. Isiguli asikufanele ukusetshenziswa kwalo mkhiqizo.
1. Ngaphambi kokusetshenziswa kufanele kusekelwe eminyakeni yobudala, isisindo somzimba sokukhetha okuhlukile kokucaciswa okuyikho kwemodeli futhi kutholakale ukuthi ngabe isikhwama siyavuza yini.
2. Sicela uhlole ngaphambi kokusetshenziswa, njengokutholakala kwimikhiqizo eyodwa (yokupakisha) kunemibandela elandelayo, ukuvinjelwa kokusetshenziswa kwe:
a) Isikhathi esisebenzayo sokuvala inzalo;
b) Umkhiqizo wonakele noma unomzimba wangaphandle.
3. Ukusetshenziswa kufanele kugcine ukusebenza kwesiguli se-thoracic kanye nokuvuselelwa komoya wokuphefumula omabili ukuthola umphumela wokungenisa umoya nokuqeda ukuqapha okuphefumulayo kwe-carbon dioxide. Njengokutholakala kokushintshashintsha kwesilinganiso se-thoracic noma esibi noma esingaguquguquki wezwa umsindo ovuzayo, kufanele adonse maski imaski yomlomo, ngemuva komoya-mpilo ophelele ngemuva kokufakwa.
4. Ukungena komoya okucindezela kahle, ingcindezi yomoya akufanele yeqe ama-25cmH2O, noma ithambekele ekuvuzeni noma kugesi esiswini.
5. Iziguli ezine-mask laryngeal kufanele zizile ngaphambi kokusetshenziswa, ukuze kugwenywe ukuthi kungenzeka ukuthi kube khona ukufisa kokugeleza okubangelwa isisu ngesikhathi sokungeniswa kwengcindezi okuhle.
6. Lo mkhiqizo inzalo ye-ethylene oxide, inzalo isebenza iminyaka emithathu.
7. Lapho ibhaluni ligcwele, inani lokukhokhiswa akumele leqe isilinganiso esilinganisiwe somthamo.
8. Lo mkhiqizo wokusetshenziswa kwemitholampilo, ukusebenza nokusetshenziswa ngabasebenzi bezokwelapha, ngemuva kokubhujiswa.
Imikhiqizo kufanele igcinwe kumswakama ohambisanayo ongekho ngaphezu kwama-80%, izinga lokushisa alikho ngaphezu kwama-40 degrees Celsius, awekho amagesi abhubhisayo negumbi elihle lokuhlanza umoya.
[Usuku lokwenziwa] Bona ilebula yokupakisha yangaphakathi
[usuku lokuphelelwa yisikhathi] Bona ilebula yokupakisha yangaphakathi
[Usuku lokushicilelwa olucacisiwe noma usuku lokubuyekeza]
Imininingwane yokushicilelwa usuku: Septhemba 30, 2016
Umkhiqizi: HAIYAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD
Langaphambilini I-Endotracheal Tube enethiphu ekhethekile
Olandelayo: Ipayipi le-Silicone Foley nge-Temperature Probe
Imboni yeLaryngeal Mask Airway
umkhiqizi womoya womaski womkhumbi
umphakeli we-laryngeal airway umphakeli
ifektri yemaski laryngeal
imaski yesilicu yelaryngeal
i-silicone laryngeal mask yomoya
abakhiqizi be-silicone laryngeal airway
i-silicone laryngeal mask airway umphakeli
abicah laryngeal imaskhi ifektri
I-Laryngeal Mask Airway esebenza kabusha
Ishubhu ye-Endotracheal eqinisekisiwe
Alahlwayo Anesthesia Mask